Typora, rakanakisa zvinyorwa zvemavara nerutsigiro rweMarkdown neMathJax | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe ukanyora nguva zhinji pakombuta iwe uchaziva iro rinonetesa basa nderekunyora iwo mavara, uchifanira kusarudza mabhureki ezvinyorwa uye nekuunza mamiriro ezvinyorwa kana nzira pfupi yekhibhodi kuti uipe italic maitiro kana kuisimbisa neine ushingi.
Unogona kufarira nzira iri nyore yekunyora zvinyorwa zvemhando yepamusoro, Pasina mapfupi, zvinokanganisa kana akaomesesa mamiriro mamanyoro. Kana iyi iri nyaya yako, nhasi tinokupa iwe yakanakisa zvinyorwa zvemavara, zita rayo nderekuti Typora.
Typora, iyo minimalist mupepeti iyo iwe yauchazoda ipapo ipapo
Typora ndeye minimalist mameseji edhisheni inoenderana neWindows, Mac uye, zveshuwa, Linux. Iyo yemahara zvachose uye ine Markdown rutsigiro.
Kana iwe usingazive, Markdown mutauro wedesktop uyo unoshandisa mavara akajeka kugadzira zvinyorwa zvemhando yepamusoro, zvinonzwika sezvakaomarara, asi mushure mechinguva chekushandisa iwe uchajaira kwazvo.
Paunovhura typora uchaona kuti zviri nyore kwazvo, iwe unongoona menyu uye pepa raunogona kutanga kunyora pairi. Asi usanyengerwa nekureruka kwayo, muTypora iwe unowana zvese zvaunoda kuti ugadzire zvinyorwa zvemhando yepamusoro.
Mashandisiro eMarkdown kodhi? Uchishandisa kumaka kuri nyore, iwe unongoda kuona iyo kodhi kwekanguva uye uchave nyanzvi, semuenzaniso, Kana iwe ukaisa izwi pakati pesterisks, inozoitwa italicized, saizvozvo, kana iwe ukaisa mbiri asterisk inozojekeswa yakashinga.
Pamusoro pekuve nerutsigiro rweMarkdown, Typora inotsigirawo mathjax, chiwedzerwa chinokutendera iwe wedzera emojis, mazwi omuzasi, manejimendi emifananidzo, matafura, kodhi, mitauro yakasiyana siyana uye kunyangwe kuiswa kwemasvomhu nenzira yakapusa.
Typora inotarisawo kukupa iwe minimalist typing ruzivo, chimiro chayo chine menyu uye nenzvimbo yekushandisa uko unogona kuona kuverenga izwi uye kuratidza kana kuviga maturusi akasiyana.
Ehe, menyu yemamiriro ezvinhu inosanganisirwa nesarudzo dzakasiyana siyana kune avo vasati vashandiswa kunyora naMarkdown neMathJax.
Sezvatakambotaura, Typora yakasununguka zvachose uye kunyange iri mubeta munguva yekushandisa hatina kuona zvikanganiso zverudzi rupi zvaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Typora, rakanakisa zvinyorwa zvemavara nerutsigiro rweMarkdown neMathJax
Ini ndiri mushandisi weiye mupepeti uye ini ndinorikurudzira kwazvo, kana iwe uchikwanisa kublogi mune izvo zvinyorwa zvakagadzirwa zvine mucherechedzo, nekuti uyu mupepeti anogona kuve wako unofarira mupepeti kuti ugadzire ako matsva eblog blog ipapo, ini mune yangu kesi ndaida kushandisa kutora manotsi mumakirasi emasvomhu asi ini ndichiri kunonoka kushandisa latex, asi kutora tsika pamwe ini ndichazviita).
Pindura Adrián Rodríguez
Zvinoita kunge zvinonakidza kwandiri, ndanga ndichizvishandisa kweanenge makore maviri, kazhinji sedhiraivhu, iyo yandinotumira kunze mune mamwe mafomati, akadai seIzwi kana mamwe. Unogona kudhawunirodha nekuwedzera madingindira kune ino edhari. Inonyanya kubatsira iyo pyhton inoziva.